Munamato wekutsvaga zvinhu zvakarasika. ? Uye Kubiwa [San Antonio]
Munamato wekutsvaga wakarasika zvinhu Izvo zvakakosha nekuti nguva zhinji tinozviona tiri mumamiriro ezvinhu akaomerwa nezvimwe zvinhu zvakaraswa kwatiri senge makiyi eimba kana zvimwe zvinhu zvakakosha semari.
Chokwadi ndechekuti kuva nemunamato uyu kunogona kutibatsira kuti tisangowana chete icho chatakarasikirwa nacho asi kuti tigare takadzikama mukati meiyo yese yekutsvaga mhinduro nekuti inogona kuva nguva yakaoma apo moyo murefu uye kugadzikana zvinowanzo kushomeka asi izvo Kuburikidza nemunamato tinogona kupora kufunga uye kuita nemazvo.
1 Munamato wekutsvaga wakarasika Zvinhu chii Musande?
2 1) Munamato kuSan Antonio wakarasa zvinhu
3 2) Munamato wekutsvaga wakarasika zvinhu San Cucufato
4 3) Munamato wekutsvaga yakarasika kana yakabiwa zvinhu
4.1 Ndinogona here kubatidza kenduru kana ndichinamata?
4.2 Ndirini pandinogona kunamata munamato kuti ndiwane zvinhu zvakarasika?
Munamato wekutsvaga wakarasika Zvinhu chii Musande?
San Antonio Iye anozivikanwa nevakawanda semusande wezvinhu zvakarasika nekuti iye pachezvake, paakanga achiri mupenyu, akaona zvimwe zviitiko zvakange zvakaomarara kuruoko rwemunhu.
Hupenyu hwemutsvene uyu chishamiso kubva pakutanga kusvika kumagumo uye, pane zvese izvi, akave mubatsiri mukuru wevanhu vakatarisana nematambudziko ekurasikirwa nezvimwe zvinhu.
Mimwe minamato iyo inogona kuitwa mune idzi nyaya kuna San Cucufato sezvo uyu aive muparidzi weevhisi kunzvimbo dziri kure uko kwakange kusinomunhu wakatsunga kuenda.
Minamato yakatanga kuiswa mukati make nekuti, pamwe naSan Antonio, akave mubatsiri ane simba uye mhinduro dzake dzakanyatsojeka uye dzakanangana zvekuti vanoshamiswa.
1) Munamato kuSan Antonio wakarasa zvinhu
«Musande Anthony, mushandi anokudzwa waMwari, anozivikanwa nekukodzera kwako uye nezvishamiso zvine simba, tibatsire kuwana izvo zvakarasika zvinhu; tipe rubatsiro rwako mumuedzo, uye ujekese pfungwa dzedu mukutsvaga kuda kwaMwari.
Batsirai kuti tiwane zvakare hupenyu hwenyasha hwakatsakatiswa nezvitadzo zvedu, uye motitungamirire kunzvimbo yekubwinya yakavimbiswa neMuponesi.
Tinokumbira izvi kuna Kristu Tenzi wedu.
Munamato uyu unogona kuitwa chero nguva kana mamiriro ezvinhu nekuti San Antonio anogara achiterera zvikumbiro zvevanhu vake uye kana achibvunza chimwe chishamiso mhinduro inouya nekukurumidza.
Rangarira kuti minamato ine simba uye kuti inova chombo chakavanzika chatinogona kushandisa chero chatinoda nekuti chinhu choga chinodiwa kuve nekutenda.
2) Munamato wekutsvaga wakarasika zvinhu San Cucufato
"Ndarasika." (taura zvakarasika), Ini ndoda kuidzosera, uye kana ndikasafa pamberi uye neiyi banga ini ndinoita mabhora ako, Sano Cucufato, uye yakasungirwa yasara, kusvikira (taura zvakarasika) kumaoko angu ini ndinodzoka. Ameni ”
San Cucufato ndomumwe wavatsvene vane simba kwazvo vatinogona kutendeukira munguva dzekuora mwoyo chaiko uye neshungu kana isu tisingawane zvinhu zvedu.
Kunyangwe zvakaoma sei zvatiri kukumbira, iyi minamato ine simba inogona kuitwa chero nguva.
3) Munamato wekutsvaga yakarasika kana yakabiwa zvinhu
«O Mwari Asingagumi uye Baba Vamasimba, Ishe weDenga nepasi, uyo kubudikidza naJesu Kristu, Mwanakomana wako, anozviratidza kune varombo kune vasina mano uye vanozvininipisa, tinokutendai nekuti makazadza Akaropafadzwa Saint Aparicio nerudo rwenyu, kuti murarame kureruka kwemoyo uchishuvira zvinhu zveKudenga.
Ipa kuti kuburikidza nekureverera kwake tinosvikira izvo zvatinokumbira, kuti ruoko rwake rune simba ruchatidzosera kwatiri nekukurumidza sezvatinogona izvo zvataita kana zvakabiwa kubva kwatiri:
(dzokorora zvaunoda kupora)
Baba tinokurumbidza uye tinokuropafadzai uye tinokutendai nekuti isu tinoziva kuti munotiteerera uye kuti tsitsi dzenyu hadziperi, tinokukumbirisai kuti muteerere kuteterera kwedu uye mutibatsire mune izvo zvakakumbirwa, kuti, mukunyaradzwa mukutambudzika kwedu, isu tifungisise zvishamiso zvesimba renyu.
Isu tinokumbira zvakare kuti muwedzere kutenda kwedu uye nerudo kuti, muchitevera muenzaniso wemunamato uye nekuzvipira kwevakaropafadzwa Saint Aparicio, ticharamba tichikurumbidzai.
Kuburikidza naJesu Kristu Ishe wedu. Ameni.
Munamato uyu wekutsvaga zvakarasika kana zvakabiwa zvinhu zvine simba kwazvo.
Izwi raMwari rinotidzidzisa kunyengetera, mundima dzake tinoona isingaverengeke mienzaniso yekutenda uko, nemunamato mumwe chete, zvishamiso zvinoshamisa zvakawanikwa.
Ndokusaka tisingafanirwe kudzinga munamato nekuti iye ane simba kwazvo. Chinhu choga chakakumbirwa munamato kuti uwane mhinduro iri kubvunzwa kuzviita nekutenda, uchifunga kuti izvo zvatinokumbira zvichapihwa.
Kune avo vakajaira kugadzira zvinangwa zvemunamato kwemazuva akati wandei kana panguva yakatarwa, asi chokwadi ndechekuti izvi zvinoenderana nezvakarongedzwa nemumwe nemumwe mumoyo mavo, nekuti ndicho chinhu chakanyanya kukosha.
Ndinogona here kubatidza kenduru kana ndichinamata?
Nyaya yemakenduru yakakosha uye mhinduro kumubvunzo uyu iri hungu hongu.
Makenduru chete haana simba asi ivo vanobatsira kuita kuti nharaunda dzese dzifambe zvakanaka uye kutorwa sezvipiriso zvevatsvene vedu nekuti kuishandisa kunoda investimendi iyo, kunyangwe iri diki, inotorwa sechiitiko. Kutenda uye kupa
Ndirini pandinogona kunamata munamato kuti ndiwane zvinhu zvakarasika?
Minamato inofanira kuitwa chero nguva yezuva uye painodiwa.
Hakuna nguva yakatarwa Izvo zvakanakira, zvisinei, kune vazhinji vanoti iwo munamato wekutanga une simba.
Kugona kunyengetera pese pese kana munamato uchiita nhumbi yedu yepamusoro, tinogona kunge tiri mumotokari, kubasa, mumba medu kana mune imwe musangano uye tichinamata nepfungwa nemoyo uye kuti munamato wekuwana wakarasika zvinhu zvine simba chaizvo sezvinoitwa muchechi.
Simba munamato wekukwezva murume
Munamato wakasimba kuti ndirote neni